Goodax Barre oo war ka soo saartay kufsigii iyo dilkii ka dhacay Muqdisho |
Muqdisho-Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullahi Goodax Barre ayaa si kulul u cambaareeyay kufsigii iyo dilkii Muqdisho loo geystay Xamdi Maxamed Faarax oo aheyd gabar dhalinyaro ah, sidoo kalena ka mid aheyd ardaydii sanadkan gashay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladda.
“Waxaan aad u cambaareynayaa kufsiga iyo dilka foosha xun ee loo geystay Allaha u naxariistee Xamdi Maxamed Faarax oo ka mid ahayd ardaydii sannadkan u fariisatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Dugsiga Sare. Waxay baabi’iyeen hammigeeda iyo rajadii ay reerkeeda ka lahaayeen” ayuu Goodax Barre ku yiri qoraal uu soo saaray.
Sidoo kale wasiir Goodax ayaa qoraalkan uga dalbaday hey’adaha cadaaladda dalka inay mudankooda mariyaan ragii falkaas geystay.
” Kufsiga iyo ku xadgudubka gabdhaheena sharafta leh waa dambi iyo diin la’aan, waana dhaqan aad u xun oo maalmahan nagu soo xoogeystay” ayuu yiri.
Xamdi Maxamed Faarax waxaa kufsi wadareed loo geystay laba maalmood ka hor, kadibna waxaa laga soo tuuray dabaq lix biyaano ah, kaas oo ku yaalla waaxda Maajo ee degmada Waaberi.
War-saxaafadeed shalay gelinkii dambe kasoo baxay taliska booliska Soomaaliya, waxaa lagu sheegay in kiiskaas baaritaankiisu uu socdo, isla markaana 4-qof oo eedeysane yaal ah gacanta lagu dhigay, kuwo kalena lagu raad-joogo.